Ukunikela Imithandazo Yokuphulukisa - Uthandaza Kanjani?
Ukunikela Imithandazo Yokuphulukisa
Khanyisa ikhandlela lokuthandaza
Iibhulozo zomthandazo waseTibetan
IziThandazo zaseMelika zaseMelika
Eyona nto iphakamileyo kunazo zonke ezixhalabileyo
Kungakhathaliseki ukuba imithandazo yakho yokuphulukisa yedwa, ilungu lentsapho okanye umhlobo, ligxile kwiqela labantu, okanye isicelo esiphezulu sokuthula emhlabeni, yinjongo yakho ekhuthaza ukuphilisa ekusebenzeni. Umthandazo unika ngokwenene impembelelo enamandla kwimeko yethu.
Injongo yokuvala amehlo ngexesha lokuthandaza kukuthulisa ingqondo kodwa injongo yezandla zombini ihlanganiswe ngexesha lomthandazo ukuthulisa imisebenzi yomzimba. Xa ingqondo kunye nezandla zicima umoya uvumelekile ukuba unxibelelwano olujoliswe ngakumbi kunye nendawo yokumazi.
ICIRCLE YOKUPHILA UKUPHILA KWENKULU
Ngenjongo yokuhlonela ukhetho lomntu ngamnye lokufumana nokukhonza okulungileyo kakhulu kunabo bonke abantu abachaphazelekayo yonke imithandazo kunye namandla okuphulukisa anikezelwa ngaphakathi kwesi Sondlo-sokuPhilisa-Ukukhanya kunikwa ngokukhululekile nangenhlonipho kwabo bacele.
Izicelo zakho zemithandazo kunye nokuphilisa zingeniswa kwi-Circle-of-Healing-Light. ( Nceda uqaphele: Ngomhla we-Septemba 27, 2014, ifom yesicelo somthandazo ikhutshaziwe endaweni yesityezelo esitsha sokwenza oko kuza kuthatha indawo yayo.
Ngexeshana, nceda ukhanyise ikhandlela lomthandazo .
Izindlela ezahlukeneyo zoMthandazo
Uluhlu olungezantsi zimbalwa zeendlela ezahlukileyo kwi-Circle of Members of Light Healing. Ngokuqinisekileyo siyinxalenye ehlukeneyo!
Umlomo Wemithandazo Yomlilo
I-Whitehorse Woman ithatha ukuphrinta kwiphepha lomthandazo kunye naye njengoko engena kwivili elinobisi ukuze afunde kwaye anikele eNyakatho, eMpuma, eMzantsi, kuMntla, kwi-Father Sun, kuMama uMhlaba, noMdali ngalunye usuku ...
sifunde apha apha malunga nendlela yokwenza lo mkhosi.
Ukubizela Kwiingelosi Zingelosi
Ndiyavuma OM, phinda ukuncenga ngokuphindaphindiweyo, chant OM, gxobhoza izandla zam kunye ukuze uzive uthando kunye namandla ahamba. Ndiye ndibamba ukushicilelwa kwesicelo somthandazo ezandleni zam kwinqanaba lentliziyo ngokuzi ukuba zizungezwe kwaye zizaliswe ngokukhanya, uthando, namandla, kwaye ziyazi ukuba iingelosi ezingummangaliso uMichael, Ariel, Raphael, noGabriel bajikeleze. Ndiyathetha amagama omntu ocelayo kunye nomntu abacela uncedo (la magama ndibhalele kwiphepha elilodwa lephepha). Ndiphela ne-OMs kunye nokuncenga okukhulu ... okwabelwana nguJudy
Ukuzimela ekuthandweni kukaThixo okuphilisa, uyavuselelwa emzimbeni nangomoya. Ingqondo kunye nemizimba yakho iphiliswa ngamandla omthando lukaThixo njengoko umyalelo kaThixo usisikelela yonke imisebenzi yemizimba yakho. Eli gameni kunye nangamandla okuphila noKristu onothando, Amen ... okwabelwana ngu-Angelguyre
I-Tasbim i-Sunset / i-Sunrise Chant
Kwangathi Uthando noKhanya kunye namandla oPhilisayo Nceda uze kum.
Kwangathi Uthando noKhanya kunye noMoya oPhilisayo Nceda uze uze ndijikeleze.
Kwangathi Uthando noKhanya kunye neMandla okuPhilisa Nceda ugezelele kum.
Kwangathi Uthando noKhanya kunye noMoya wokuPhilisa Philisa bonke abakujikelezile ... okwabiwe nguDana Ludeking
Umyalezo osuka kuDana: Ndiya kuluhlu kwaye ndithandaze okanye ndihlabelele umthandazo wam ukuphulukisa Ndafunda kwiphupha (jonga ingoma ngaphezulu). Ndiyabona ukuba umsebenzi njengendlela yokuphulukisa okanye ukuthandaza kwabo banesidingo kubo bonke basebenzisana kunye emzimbeni omkhulu okanye umjikelezo wokuphilisa. Ngoko ke ndiyathandazela bonke abo abakwi-Circle of Healing Light ... kunye ne-Circle of Healing Light ukufikelela kubo bonke kunye nayo yonke into, njengoko ndikholelwa ukuba sonke sinxibeleleneyo. Ndavuka ndakhala ngala mazwi ngenye intsasa emva kokuba ndithandazele indlela yokuthulisa abanye. Ndiyisebenzisa kwakhona iReiki, ne-Tai Chi, kunye neendlela zokubonakalisa xa kuziwa ekutshatheni ukuphilisa kwabanye. Ngamanye amaxesha ndilindele igama okanye imeko ukuba ndixhumeke kum kwaye ndijolise ngakumbi kubo. Ndenza umxube weendlela ezingezizo zakwaShamanic endizifundile kumhlobo wam oMoya ngephupha, nokucamngca.
I-PS ndiyifumana isithethe sam ngokomoya okanye i-Heinzism okanye iTabbim (Inyaniso Njengaye Ndikhoyo) Ukuba unayo ixesha kwaye ufuna ukufundwa ngakumbi malunga nendawo yokujonga indawo yendawo yenkokheli kwiwebhusayithi yam ... www.dnatureofdtrain.zzn.com
Ukuthumela amaReiki amandla
Ndiyifumana iReiki kum zonke iimpawu kwaye ndinike enye INQUBO NOKUBHALWA OKUQHELEKILEYO ukuba "Ndicela uReiki ukuba aphumelele emphefumlweni wam, x, y umphefumlo" njl. Ndikholelwa ukuba uReeki yindlela yokutshintshisana kwamandla. Xa ndiyenza le ndlela ngasentla ndifana novakalelo bunye kunye nento yonke ... " okwabelwana nguNithya
Ukufakwa Kwezandla / Ukuthumela uMoya oMhlophe weReiki oMhlophe
Isiqhelo esinalo ukuba ndihlale phambi kwekhomputha ngaphambi kokuba ndilale kwaye ndibeke izandla kwikhompyutheni, ndicima phantsi uluhlu, ngamanye amaxesha ndiya kufunda esi sicelo njengoko ndifunda phantsi kwaye ngamanye amaxesha umoya undifumana ukuthandaza umthandazo jikelele. Ndithumela i-Divine White Reiki Light ... eyabelwe nguSadaqa
Ekubeni ndiqhuba uMahikari noReiki, ndisebenzisa izandla zam xa ndithandaza, kwaye ukuba ndihlala ndihlala ekhompyutheni ndithandazele umntu ocelayo kunye nabo bonke abantu abadibene naloo mntu "ngelungiselelo elingcono likaThixo. "U Xa kunokwenzeka, ndiyilanda uluhlu lwesicelo, zama ukuluxhoma, kwaye uyithwale ephakamileyo kwipokothoni ukuze uphume kwaye uthandazele xa ndifumana umzuzu wokugcina. Ndibonele umthandazo "onobumbano" kubo bonke abafumanayo, wena, kunye nabanikeli bemithandazo, ungabhidli abantu ... okwabelwana nguPatsy
Ukuboniswa kokukhanya kwekhandlela
Ndikhanyisa ikhandlela kwaye ndicamngce ngelixa ndicinga ngomntu / isilwanyana engqondweni yam.
Maxa wambi nditshisa isiqhumiso ... esabelana nguGayle
Njalo ixesha ndifumana i-mail evela kwi-Healing Circle ndibeka yonke imithandazo kwitafile ekhethekileyo apho ndifumana iintyatyambo ezintsha kunye neekristal ezikhethekileyo. Ndikhanyisa ikhandlela yonke imihla. Ukuba ndilibale omnye umntu kwintsapho iya kukhanyisa ikhandlela. Le migudu yeqela ... eyabelwe nguPat
Ukufowunela ekuKhanyeni okuMhlophe
Okokuqala ndibeka isandla sam kwikhompyutheni emva kokuba ndikhuphe izicelo, ndithandaza kuBawo ukuba ndikholise ukukhanya okuMhlophe kaMoya oyiNgcwele , ukufudumala koMthuthuzeli, nokuphulaphula nokuphendula imithandazo yam egameni wakhe uNyana. Emva koko ndafunda izicelo, ndaye ndazibandakanya kwezinye iimeko endazifunda ngazo kwaye ndiqhele ukuthumela isicelo esithile sezicelo eziqhelekileyo. Ukuba umntu uhlaselwa ngamandla angendawo, ndimisa yonke into kwaye ndithumela ukuKhanya okuMhlophe ukuwajikeleza kwaye ndifuna ukuba ikhefu elibi lihambe kwigama likaYesu. Akukho nto enye eyantya kunokuba idonwe kwaye iqhutywe kakubi kunye nokubi. Ndiyazi, ndahlala kuyo kwaye yaphantse idilize. Kodwa mna ndilapha kwaye asisayi kuguqulwa ngamagqotsha amancinci. Xa ndifika ekupheleni kwoluhlu ndiya kuphinda ndinikele imithandazo yamalungu kunye neveki nganye ixesha ndiyathandaza (amaxesha ambalwa ngosuku) ndiphinde ndicele intsikelelo kubo bonke abakoluhlu ... okwabelwana ngu-Ellie
Umyalezo ovela ku-Ellie: Xa ndandisayina kuqala ngumbuthano wokuthandaza ndandisoyika, ndedwa, kwaye ndifuna umthandazo omningi ngokwam. Andizange ndiqaphele indlela ukuphilisa ngayo ukuba baninzi abantu ukuba bathandazele. Ngokukhawuleza andinguye "Oyedwa kuphela." Ndakwazi ukufumana uncedo. Ndiyombulelo gqitha ukuba abanye banithandazele. Sinemimangaliso imithandazo kwixesha elidlulileyo kwaye kuya kuba nzima ukubukela nokuvakalelwa kwenkqubo, ndithi ndiziva ngenxa yokuba unako ukuva uthando kunye nokufudumala kokuphilisa okuthunyelwa egameni lakho. Ndiyabonga ngethuba lokuthandazela abanye abanesidingo.
Iifayile zeKharityhulam ze-Oracle
Iimpawu zonyango lwe-Reflexology kunye ne-inshurensi
Uloyiko lokubikezelwa kokufa kwee-Psychics
Indlela yokusebenzisa i-Sweetgrass yokuPhulukisa
Iyintoni Indleko ye-LSAT ngo-2017-18?
Ubukhosi bamazwe aseYurophu
I-Synopsis ye-Romeo ne-Juliet Ballet
Kutheni Abaphambuki behlaziya? nguGeorge Orwell
Usuku Oluhlaza - "Ndivuselele Xa Kuphela NgoSeptemba" Ividiyo Yomculo
Imfazwe Yehlabathi II: USS Hornet (CV-12)
I-Admissions yeProfethi ye-College yaseHamilton
11 Iingcaphuno ezingenakulibaleka ezivela 'I-Scarlet Letter'
IiKholeji eziPhambili zaseMantlanti neeYunivesithi
Yintoni i-Isogloss ithetha kwiilwimi?
"I-Copenhagen" nguMichael Frayn
I-Endergonic vs Exergonic (Ngemizekelo)
40 Iingesi eziqhelekileyo zesiNgesi
I-Hertz Rent2Buy Inkqubo ngeNtsha indlela yokuthenga iimoto ezisetyenziswayo
Ukuguqula iMimoya yeePascals (kwi-Pa ukuya kuPa)
Iimpi zeMpi kunye nezoPolitiko zamaKhankaso
Ifomu yelizwe elinokuthi lenze impembelelo yalo
UWolfgang Amadeus Mozart
IHununted e Seattle